Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waayihii hore nin ayaa si xun ii dhaawacay. Wuxuu iga qabtay lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonaynin in uu sidaasi ugu sameeyo. Inta baddan weli waan ka fikiraa. Hadda anigu waxaan leeyahay gabar saaxiibtayda ah. Sideen arintaasi ugala hadli karaa? – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waayihii hore nin ayaa si xun ii dhaawacay. Wuxuu iga qabtay lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonaynin in uu sidaasi ugu sameeyo. Inta baddan weli waan ka fikiraa. Hadda anigu waxaan leeyahay gabar saaxiibtayda ah. Sideen arintaasi ugala hadli karaa?
Waa arin la fahmi karo in aad weli arintaasi ka fikirtid.
Inbaddan oo dadka kamid ah kuwaas oo lasoo kulmay arimahaan oo kale waa kuwo inta baddan ka fikira.
Laga yaabo in ay tahay in aad ka fikirtid xitaa inbaddan.
Sababtoo ah adiga iyo saaxiibtaada waxaad tihiin kuwo aad isugu dhow.
Laga yaabo in aad qabtid dareemo cajiib ah marka aad u dhowaatid.
Laga yaabo in aadan hubin haddii aad u sheegaysid iyo haddii aadan u sheegaynin.
Ma doonaysaa in aad u sheegtid?
Ka fikir waxa aad ka doonaysid ayada marka aad jir ahaan isku dhowdihiin.
Kadibna ka fikir waxa ku saabsan waxa aad doonaysid in aad ku dhahdid ayada.
Laga yaabee ereyadaan ayaa ku caawin doona:
Qof ayaa mar si xun ii dhaawacay.
Sidaas darteeda ma doonayo in aan sameeyo wax markale i dhaawici doona.
Sidoo kale mararka qaar waxaan doonayaa in aan joojiyo in aan dhakhso hab kuu siiyo.
Midaasna waxaa sabab u ah xusuusahayga.
Ma ahan mid adiga kugu saabsan.
Ka fikir sida aad u rabtid in aad u sheegtid.
Waa muhiim in ay caadi kuu tahay adiga.
Waad u sheegi kartaa waxa aad ayada ka doonaysid.
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno-jir ah waxaana leeyahay saaxiibo labb iyo dheddig ah oo xadidan.Waxaynu isla qaadanaa wakhtiga baddankiisa.Mid kamid ah wiilasha ayaa marwalba aad iigu soo dhowaada.Anigu ma doonayo.Sideen ugu sheegaa?Anagu waxaynu nahay saaxiibo!
Next Next post: Aniga ( oo ah gabar, 16 jir ah) waxaan ku socdaa kursiga curyaamiinta.Weligay ma yeelan wiil saaxiib ila ah.Saaxiibaday kuma socdaan kuraasta curyaamiinta.Dhammaan saaxiibaday waxay soo yeesheen wiilal saaxiibo la ah.Tani miyay sabab u tahay in wiilashu aysan u maleyn in aan qurxoonahay?